१७ वडाको मतगणना गर्दा २ वडामा पछि परे बालेन, कुन वडामा कसको कति मत ? - Mitho Khabar
May 20, 2022 mithokhabarLeaveaComment on १७ वडाको मतगणना गर्दा २ वडामा पछि परे बालेन, कुन वडामा कसको कति मत ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले निरन्तर अग्रता कायम गरिरहेका छन् । उनले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धीहरुलाई करिब दोब्बर मतले पछि पार्दै महानगरमा अग्रस्थानमा रहेका छन् ।
पछिल्लो ४ बजेको मत परिणाम अनुसार बालेनले २९,५८२ मत ल्याएका छन् । एमालेका केशब स्थापित भन्दा उनी १३,६६१ मतान्तरले अगाडि रहेका छन् ।
एमालेका उम्मेदवार केशब स्थापितले १५,९२१ मत ल्याएका छन् । गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिहले १५,०१० मत ल्याएकी छन् ।
हलसम्म वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, २८, ३० र ३२ को मतगणना सकिएको छ । जसमा प्रत्येक वडामा बालेन्द्र शाहको अग्रता देखिएको छ ।
वडा नम्बर १ मा बालेनको लौरो चिन्हले ७८३, एमालेका केशव स्थापितको सूर्य चिन्हले ३६५ र कांग्रेसकी सिर्जना सिंहको रुख चिन्हले ४५१ मत पाएका छन् । यस्तै वडा नम्बर २ मा लौरोले १२१५, सूर्यले ७२८ र रुखले ४९७ मत पाएका छन् । वडा नम्बर ३ मा लौरोमा २४०६, सूर्यमा १२०३ र रुखमा ११७० मत खसेको छ ।
वडा नम्बर ४ मा लौरोमा ३९५६, सूर्यमा १९२४ र रुखमा १५२२ मत खसेको छ । यस्तै वडा नम्बर ५ मा लौरोले १५०१, सूर्यले १०६६ र रुखले ७२७ मत पाएका छन् । वडा नम्बर ६ मा लौरोले ३१६३, सूर्यले १५६७ र रुखले २०५० मत पाए ।
यस्तै वडा नम्बर २८ मा लौरोले ७१७, सूर्यले ७४१ र रुखले ७१० मत पाएका छन् । वडा नम्बर ३० मा लौरोले १७०१, सूर्यले ७४९ र रुखले १०१९ मत पाएका छन् ।वडा नम्बर ३२ मा लौरोमा ५४४०, सूर्यमा २४७५ र रुखमा १९९५ मत परेको छ ।
अहिलेसम्म काठमाडौंका ९ वटा वडाको मतगणना भइरहेको छ । वडा नम्बर ६, ७, ८, ९, २५, २६, २७, २९, र ३१ को मतगणना भइरहेको छ । गणनामा २७ र २५ वडाबाहेक अन्य वडामा बालेन्द्र शाहको अग्रता देखिएको छ ।
वडा नम्बर ६ मा ८७०८ मतगणना हुँदा लौरोले ३१६३, सूर्यले १५६७ र रुखले २०५० मत पाए । वडा नम्बर ७ मा ५१०० मतगणना हुँदा लौरोले २१४९, सूर्यले ९१६ र रुखले ८२२ मत पाएका छन् । वडा नम्बर ८ मा २१०१ मतगणना हुँदा लौरोले ७४५, सूर्यले ३९९ र रुखले ४७०मत पाएका छन् । यस्तै वडा नम्बर ९ मा ५०० मतगणना हुँदा लौरोले २०८, सूर्यले ९२ र रुखले ६४ मत पाएका छन् ।
वडा नम्बर २५ मा ५०० मतगणना हुँदा लौरोले ७०, सूर्यले १२९ र रुखले ६९ मत पाएका छन् । यस्तै वडा नम्बर २६ मा ६०० मतगणना हुँदा लौरोले १९९, सूर्यले ११५ र रुखले १२४ मत पाएका छन् । यस्तै वडा नम्बर २७ मा १६९२ मतगणना हुँदा लौरोले २८३, सूर्यले ५३५ र रुखले ३६५ मत पाएका छन् ।
वडा नम्बर २९ मा ४६९२ मतगणना हुँदा लौरोमा १६१७, सूर्यमा ११७१ र रुखमा ९७१ मत खसेको छ । वडा नम्बर ३१ मा ९०५६ मतगणना हुँदा लौरोमा ३४२९, सूर्यमा १७७४र रुखमा १९५६ मत परेको छ ।
‘बालेनले जति मतले जित्छन् त्यति रूपैयाँ महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रलाई दिन्छु’
पढाउन विद्यालय जाँदै गरेकी शिक्षिकाको बाटैमा मृत्यु